Maxaa xiirid ku habboon maqaarkaaga? | Ragga Stylish
Go'aanka ugu horreeya marka la dooranayo xiirashada, ma aasaasi baa, mandiil gacmeed ama mandiil koronto?
Ragga badankood waxay ku bilaabaan inay xiiraan xiirista mandiil gacmeedyada si tartiib tartiib ah loogu beddelo isticmaalka kuwa korontada, laakiin hadda, dhammaan xulashooyinka aan haysanno labadaba oo ah xiirashada iyo jarista timaha, makiinadaha korontada waxay leeyihiin taageerayaal aad iyo aad u badan da'da hore. Laakiin…. Noocee xiirashaa ugu fiican maqaarkayga?
Nooc kasta oo maqaar ahi wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah sidaa darteedna sidoo kale wuxuu leeyahay xiirasho ku habboon kuwa kale.
Una maqaarka isku dhafan ee caadiga ahWaad isticmaali kartaa nooc kasta oo mandiil ah, ha ahaato buug ama koronto, maadaama aadan wax dhibaato ah kaa xiiraynin, taasi waa, inaad marwalba u isticmaasho alaabada saxda ah xiirashada saxda ah.
Wixii ah maqaarka xasaasiga ah ee u nugul cuncunka, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo mandiillada korontada ku shaqeeya ee ku darsamaya ikhtiyaarka beeyada iyo sidoo kale haddii ay awoodaan, ku xiiraan qubayska hoostiisa si aad si fiican ugu diyaarsatid maqaarka, in daloolka uu furan yahay oo timuhu ka jilicsan yihiin si loo yareeyo xanaaqa.
Una maqaarka leh finanka ama timaha oo noqda kuwo aad u adagWaa inay ka fogaadaan mandiillada gacanta lagu xiirayo si looga fogaado inay finka jabiyaan oo ay sababaan infekshin. Isticmaal mandiil koronto leh jel xiirista wanaagsan si aad uga fogaato dhaawacyada iyo xanaaqa.
Marka aad go'aansato nooca xiirashada, Ma ogtahay sida ay u noqonayso nooc kasta oo mandiil ah?
1 Tallaab-tallaabo xiiro manka
2 Tallaab-tallaabo xiirashada korontada
Tallaab-tallaabo xiiro manka
Xiirashada saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad diyaarsato maqaarka oo aad raacdo dhawr tallaabo si ay xiirantu u ahaato sida mid xiiran oo qumman.
Diyaarso maqaarka. Ayaa ka fiican waad xiirtaa markaad ka soo baxdo qubeyskamaadaama biyaha kulul ay ka dhigayaan daloolada inay furmaan oo nadiif noqdaan. Intaa waxaa dheer, timuhu waxay noqon doonaan kuwo jilicsan. Haddii aadan xiiri karin ka dib qubayska, wejigaaga ku dhaq shey wejiga ku habboon nooca maqaarkaaga iyo biyo kulul.
Codso shey xiirashada oo ku habboon nooca maqaarkaaga. Haddii aad xasaasi tahay, alaabada maqaarka xasaasiga ah ee sameeya wajigaaga ma xanaaqayo, hadday qalalan tahay, badeecad aad u jilicsan oo jilcisa timaha adag una qoysa maqaarka qalalan, iwm.
Dhaqdhaqaaq wareegsan oo leh duugis yar marka aad codsaneyso sheyga, waa lagama maarmaan, iyo sidoo kale u oggolaanshaha sheyga xiirashada inuu u dhaqmo daqiiqado si uu u dhexgalo, u jajabiyo maqaarka, u furo daloolada una jilciyo timaha, isagoo fududeynaya boodada daabka.
Wixii xiiro gacanta, ka alaabooyinka sida wanaagsan u socdaa waa xumbo aad u jilicsan oo si fudud loo codsan karo. Jeermiska ayaa sidoo kale kufiican in laga helo dareenkaas cusub ee maqaarka. Wax kasta oo ay tahay badeecada, ha u isticmaalin wax aad u badan, si aysan u jajabin daabka.
Tallaab-tallaabo xiirashada korontada
Waa ikhtiyaar raaxo leh oo wax ku ool ah oo wax walba kuu sameeya. Way is nadiifisaa, ku deg degtaa xitaa meelaha adag waxayna qaadataa waqti aad u yar in la xiirto. Noocan xiirashada waa qalalan tahay, marka maqaarku yuusan qoyanin markaad mashiinka korantada wado.
Amarka xiirashada wuxuu lamid yahay sida manjooyinka gacanta lagu sameeyo, laga bilaabo dhabannada, dhinacyada dhicitaanka, qoorta iyo meelaha ugu murugsan, laakiin jihada waxay ka soo horjeedaa hadhuudhka, jihada ka soo horjeedka koritaanka timaha, sidaas darteed maxaa waa inaad xiirtaa salka ilaa top, iyo qoorta kor ilaa hoos.
Ka dib markaad xiirto, isticmaal balsam ku habboon ama ka dib u xiir nooca maqaarkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Maxaa xiirid ku habboon maqaarkaaga?
Qaabka qowmiyadeed ee ragga moodada xagaaga xagaaga 2013